“Gịnị Mere Chineke Ji Kee Mmadụ?” Baịbụl Zara Ajụjụ M Niile | Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Maya Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Akụkọ Mayli Gündel kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1987
ABỤ M ONYE: AZEBAỊJAN
NDỤ M BIRI: NNA M BỤ ONYE ALAKỤBA, NNE M ABỤRỤ ONYE JUU
Amụrụ m n’obodo Baku, nke dị n’Azebaịjan. Nne na nna m mụrụ ụmụ abụọ. Abụ m nwa nke abụọ. Nna m bụ onye Alakụba, ebe nne m na-ekpe okpukpe ndị Juu. Ha abụọ hụrụ ibe ha n’anya, ha anaghịkwa enye ibe ha nsogbu maka na ihe otu onye kweere dị iche na nke ibe ya. Ọ na-abụ papa m buwe ọnụ n’ọnwa Ramadan, mama m na-enyere ya aka. Mama m mewekwanụ ememme Ngabiga ndị Juu, papa m enyere ya aka. N’ụlọ anyị, anyị nwere Koran, nwee Tora, nweekwa Baịbụl.
N’oge ahụ, ana m ewere onwe m ka onye Alakụba. Ọ bụ eziokwu na m kweere na Chineke dị, ma e nwere ihe ndị na-agbagwoju m anya. M na-eche, sị, ‘Gịnị mere Chineke ji kee mmadụ, gịnịkwa mere mmadụ ga-eji tachaa ahụhụ n’ụwa a, ya agaakwa tawa ahụhụ ebighị ebi n’ọkụ ala mmụọ?’ Ebe ndị mmadụ na-ekwu na ihe ọ bụla merenụ bụ uche Chineke, m na-eche, sị, ‘Ọ̀ bụ Chineke na-akpatara ndị mmadụ nsogbu? Ha tawazie ahụhụ, ya elewe ha, obi ana-atọ ya ụtọ?’
Mgbe m dị afọ iri na abụọ, ebidoro m ikpe ekpere ndị Alakụba na-akpọ namaz. A na-ekpe ya ugboro ise n’ụbọchị. O teghị aka, papa m etinye mụ na nwanne m nwaanyị n’ụlọ akwụkwọ ndị Juu. A na-akụziri anyị iwu na omenala ndị dị na Tora, na-akụzikwara anyị asụsụ Hibru, na ihe ndị ọzọ. N’ụbọchị ọ bụla, tupu anyị ebido ịmụ ihe na klas, anyị na-ebu ụzọ ekpe ekpere otú ndị Juu si ekpe. Ma, m na-ebu ụzọ ekpe ekpere ndị Alakụba n’ụtụtụ tupu mụ agawa akwụkwọ, m ruzie n’ụlọ akwụkwọ, mụ esorokwa ha kpee ekpere ndị Juu.
Achọsiri m ike ka a zaa m ajụjụ ndị m nwere otú ga-edo m anya. Ọtụtụ ugboro, m jụrụ ndị rabaị nọ n’ụlọ akwụkwọ anyị, sị: “Gịnị mere Chineke ji kee mmadụ? Olee otú Chineke si were papa m bụ́ onye Alakụba? Papa m bụ ezigbo mmadụ, oleekwanụ ihe mere e ji were ya ka onye na-adịghị ọcha? Gịnị mere Chineke ji kee ya?” Ihe a zara m enweghị isi na ọdụ.
N’afọ 2002, m kwụsịrị inwe okwukwe na Chineke. N’afọ ahụ, anyị kwagara Jamanị. Naanị otu izu anyị rutere Jamanị, ọrịa strok jidere papa m, ya atụbọọ. Kemgbe ọtụtụ afọ, ana m ekpe ekpere ka Chineke mee ka ahụ́ sie ndị ezinụlọ anyị ike nakwa ka ihe na-agaziri anyị niile. Ebe o doro m anya na ọ bụ naanị Onye Pụrụ Ime Ihe Niile nwere ike ime ka mmadụ dịrị ndụ ma ọ bụ ka mmadụ nwụọ, m nọ na-ekpe ekpere kwa ụbọchị ka papa m gbakee. Echekwara m na ‘o nweghị oké ihe ọ bụụrụ Chineke ịza ekpere obere nwata nwaanyị dị ka m ji obi m niile na-ekpe.’ Obi siri m ike na ọ ga-emere m ihe m na-arịọ ya. N’agbanyeghị ekpere m niile, papa m nwụrụ.
Obi gbawara m na Chineke azaghị ekpere m. Anọ m na-eche, sị, ‘Ma ọ́ bụghị na otú m si na-ekpe ekpere adịghị mma, ya abụrụ na Chineke adịghị.’ Ihe a merenụ enyeghị m ọnụ okwu, enwezighịkwa m ike ikpe ekpere namaz. Ihe a na-eme n’okpukpe ndị ọzọ amasịghịkwa m, mụ ekwuzie n’obi m na Chineke adịghị.
Mgbe ọnwa isii gachara, Ndịàmà Jehova bịara ozi ọma n’ụlọ anyị. Ma, ebe ọ bụ na o nweghị ihe anyị ji ndị sị na ha bụ Ndị Kraịst kpọrọ, mụ na nwanne m nwaanyị chọrọ iji akọ gosi ha na ihe ha kweere abụghị eziokwu. N’ihi ya, anyị jụrụ ha, sị: “Gịnị mere Ndị Kraịst ji efe Jizọs, obe, Meri, na ihe ndị ọzọ a kpụrụ akpụ ebe Iwu Iri kwuru na ime otú ahụ adịghị mma?” Ndịàmà Jehova ahụ ji Baịbụl gosi anyị na ezigbo Ndị Kraịst anaghị ekpere arụsị nakwa na ọ bụ naanị Chineke ka e kwesịrị ikpegara ekpere. Ihe a ha kwuru juru m anya.
Anyị jụziri ha: “Oleekwanụ maka Atọ n’Ime Otu? Ọ bụrụ na Jizọs bụ Chineke, olee otú o si bụrụ na ọ dịrị ndụ n’ụwa, ndị mmadụ egbuokwa ya?” Ha jikwa Baịbụl zaa anyị ajụjụ a ma kọwaara anyị na Jizọs abụghị Chineke, ya na ya ahaghịkwa. Ndịàmà Jehova ahụ gwara anyị na ọ bụ ya mere na ha ekweghị n’Atọ n’Ime Otu. Ihe a ha kwuru tụrụ m n’anya, mụ ekwuzie n’obi m, ‘Oleekwanụ ụdị Ndị Kraịst ndị a bụ?’
Ma, m chọrọ ịmata ihe mere ndị mmadụ ji na-anwụ anwụ na ihe mere Chineke ji kwe ka ndị mmadụ na-atagbu onwe ha n’ahụhụ. Ndịàmà Jehova ahụ nyere m akwụkwọ bụ́ Ihe Ọmụma nke Na-eduba ná Ndụ Ebighị Ebi. * Akwụkwọ a nwere ọtụtụ isiokwu zara ajụjụ ndị m na-ajụ. Ha ji ya bido ịkụziri m Baịbụl ozugbo.
Mgbe ọ bụla mụ na ha na-amụ ihe, otú ha si eji Baịbụl aza ajụjụ ndị m na-ajụ ha na-edo m anya. Abịara m mata na aha Chineke bụ Jehova. (Abụ Ọma 83:18) Ọmarịcha àgwà e ji mara ya bụ ịhụnanya. (1 Jọn 4:8) O kere ndị mmadụ n’ihi na ọ chọrọ ka ha dịrị ndụ otú yanwa dị. Aghọtakwara m na n’agbanyeghị na Chineke kwere ka mmegbu dịrị, ọ kpọrọ ya asị, ọ ga-ewepụkwa ya n’oge na-adịghị anya ruo mgbe ebighị ebi. Amụtakwara m na ọ bụ isi Adam na Iv nupụrụ mere imi na anya ji dị ụmụ mmadụ otú a ọ dị ha. (Ndị Rom 5:12) Otu n’ime nsogbu ndị nnupụisi ha na-akpatara anyị bụ ọnwụ, dị ka ọnwụ papa m. Ma mgbe ụwa ga-aghọ paradaịs n’oge na-adịghị anya, Chineke ga-eme ka nsogbu a na nsogbu ndị ọzọ kwụsị n’ihi na n’oge ahụ, ndị nwụrụ anwụ ga-adị ndụ ọzọ.—Ọrụ Ndịozi 24:15.
Baịbụl zara ajụjụ m niile. M bidoro nwewekwa okwukwe na Chineke. Mgbe m matakwuru Ndịàmà Jehova, aghọtara m na ha nọ n’ebe niile n’ụwa. Otú ha si hụ ibe ha n’anya ma dị n’otu masịrị m. (Jọn 13:34, 35) Ihe m mụtara gbasara Jehova mere ka ijere ya ozi gụwa m agụụ. N’ihi ya, m kpebiri na m ga-abụ otu n’ime Ndịàmà Jehova. E mere m baptizim n’abalị asatọ n’ọnwa Jenụwarị afọ 2005.
Otú ihe e kwuru na Baịbụl si doo anya ma dị mfe nghọta mere ka ndụ m gbanwee. Ọtụtụ ihe m na-amụta na Baịbụl na-eme ka obi ruo m ala. Ihe na-eme m ezigbo obi ụtọ ma na-akasi m obi bụ na m na-atụ anya ịhụ papa m ọzọ mgbe Chineke ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ otú o kwuru na Baịbụl.—Jọn 5:28, 29.
O ruola afọ isii mụ na ezigbo di m Jonathan lụrụ. Anyị na-enwekwa obi ụtọ. Anyị abụọ ahụla na ihe Baịbụl kwuru banyere Chineke bụ eziokwu, o sighịkwa ike nghọta. Ma, uru dị na ya enweghị atụ. Ọ bụ ya mere obi ji atọ anyị ụtọ ịgwa ndị ọzọ ihe ọma niile anyị na-atụ anya ha. Ugbu a, aghọtala m “ụdị Ndị Kraịst” Ndịàmà Jehova bụ. Ha bụ ezigbo Ndị Kraịst.
^ para. 15 Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya, ma a naghịzi ebipụta ya.